सारा नेपालीलाई सम्झिएर रुन पुगे : सावित्रा भण्डारी (अन्तरवार्ता) - Khelpati
सारा नेपालीलाई सम्झिएर रुन पुगे : सावित्रा भण्डारी (अन्तरवार्ता)
मगलवार, माघ २९, २०७५ खेलपाटी संवाददाता
‘जसो गर जे भन जता सुकै लैजाउ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो ..........’
१९७४ एडीको यो गित फेरी एक पटक भारतको उडिसास्थित भुनवेश्वरमा गुन्जियो । नेपाली महिला टिमले कालिङ्गा रंगशालामा ईतिहास रच्यो । चीरप्रतिद्वन्दी भारतलाई उसकै घरेलु मैदानमा हराउँदै नेपालले ऐतिहासिक जित आत्मसाथ गरेको थियो ।
जब खेल सकियो, खेलाडीहरु ड्रेसिङ रुममा फर्किए । अनि बेहोसी पारामा घन्काए, १९७४ एडीको सोही गित ।
नेपालले भारतविरुद्व ऐतिहासिक जित दर्ता गर्दा भुवनेश्वरको कालिङ्गा रंगशाला एकपटकका लागि साक्षी बस्यो । दक्षिण एसियाली फुटबलमा भारतको एकछत्र दबदबालाई नेपालले भुवनेश्वरमा तोडेको हो । नेपालले प्राप्त गरेको जितमा एक खेलाडी नायक रहिन् । सावित्रा भण्डारी अर्थात 'साम्बा' ।
सुरुवातमा तीन मिनेटको अन्तरमा दुई गोल गर्दै उनले नेपालको जितमा नायकत्व प्रर्दशन गरिन् । उनै सावित्रा खेल सकिए लगत्तै गहभरी आँशु लिएर मैदानबाट बाहिरिन् ।
दक्षिण एसियाली महिला फुटबलकी उत्कृष्ट स्ट्राईकर मध्यकी एक उनै सावित्रा भण्डारीसंग खेल सकिए लगत्तै हामीले कुराकानी गरेका थियाै । जसको सम्पादित अंश :
कस्तो रह्यो भारतविरुद्वको नेपालको प्रर्दशन ?
खेलको १० मिनेट अगाडीनै गोल निस्किन पुग्यो । हामीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सफल भयौ । त्यसपछि पाएको अवसर हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौ ।
भारतले निकै खतरनाक आक्रमण बुनेको थियो ।
लामो लामो पास खेल्दै खेलमा दबाब सिर्जना गर्न खोजेका थिए । हाम्रो डिफेन्डसले राम्रो खेल्यौ । हामीले रोक्न सफल भयौ । एक हिसाबले टिम गेम खेल्यौ । जित्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिएका थियौ । सोचेको भन्दा राम्रो प्रर्दशन भयो । हामीमा भारतविरुद्व जितको भोक थियो । त्यसलाई हामीले मैदानमा देखायो । हामी खुसी छौ ।
खेल सकिए लगत्तै तपाई मैदानमै रुनु भयो, किन ?
खेल सकिएपछि खुसीको आँशु थाम्न सकिन । त्यही भएर रोए । नेपालका लागि ईतिहास रचेका थियौ । हामी सधै उनीहरुसंग हार्दै आएका थियौ । सधै डोमिनेट भएर खेल्न परेको थियो ।
तर उनीहरुको मैदानमा भारतलाई हराउँन पाउदाँ छुट्टै आभाष भएको छ । सारा नेपालीलाई सम्झिएर रुन पुगे ।
सुरुमै दुई गोल निस्किएला भन्ने लागेको थियो ?
प्रशिक्षकले जसरी हामीलाई प्रोत्साहीत गर्नुभएको थियो, त्यसले हामीलाई सहज भयो । हामी सधै दबिएको अवस्था थियो । म भारतविरुद्वको खेलमा निकै केन्द्रित थिए । गम्भिर पनि थिए ।
नेपालीलाई जसरी हुन्छ खुसी दिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । आम नेपालीलाई खुसी दिलाउने पक्षमा थिए । प्रशिक्षकले भन्नुभएको थियो, यो ईतिहास रच्ने दिन हो भनेर, यो दिन फर्किएर आउदैन भनेर ।
सुरुवाती ५ देखि १० मिनेटमा जसरी गोल सम्भव भयो, त्यसले हामीलाई अझ सहज बनायो । त्यसपछि खेल्न सहज भयो भन्ने लाग्छ ।
भारतविरुद्वको नतिजाले साफमा नेपाली टिमको मनोबल कस्तो रहन्छ ?
जितले खेलाडीलाई थप उर्जा दिएको छ । अब साफ जित्छौ भन्ने पुरा विश्वास आएको छ ।